बजेट समयमै नआउँदाका ६ परिणाम
Tue, Jun 19, 2018 | 17:56:38 NST
पहिलो परिणाम : बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती
बजेट समयमै आईदिंदा बजेट खर्च गर्नको लागि खरिद सम्बन्धी जुन प्रक्रिया हुन्छ, त्यसलाई सहजीकरण हुन्छ । यसले बजेट समयमा खर्च हुने र त्यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर ल्याउने हुन्छ । विगतका बर्षहरुमा बजेट ढिला आउने, असार साउनमा बजेट आउने त्यसपछि त्यसको खर्च गर्न लामो प्रक्रियाहरु पास गर्दै जानुपर्ने, त्यसले गर्दा पछिल्लो चरणमा मात्र खर्च हुने प्रबृत्तिले आर्थिक बर्षको अन्त्यमा मात्र एकोहोरो चाप पर्ने र त्यो खर्चको त्यत्ति प्रभावकारिता नहुने हुन्थ्यो । खर्च गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले डोर्‍याउने परिस्थितिले विकास बजेटको दुरुपयोग हुने हुन्थ्यो । ढिलो गरी बजेट आउँदा ठीक त्यही हुन्छ ।
दोस्रो परिणाम : खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आउने
गत वर्ष समयमा बजेट आएकाले सरकारले खर्च गर्ने क्षमतामा केही सुधार गरेको देखिन्छ । चुनाव अगाडि र पछाडि भन्ने कुरा चुनावको सन्दर्भमा सान्दर्भिक होला ? तर आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै बजेट सम्बन्धी सबै प्रावधान नियमित प्रक्रियाबाट पास भइसकेको अवस्थामा नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने वित्तिकै खर्चको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । त्यसकारण चुनावभन्दा पछाडि जाने परिस्थिति आयो भने तपाई हामीले बुझ्न जरुरी छ कि, सरकारले खर्च गर्ने क्षमता गुमाउदैछ ।
तेस्रो परिणाम : बजेटको दुरुपयोग हुने
आठ दश वर्षको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने सम्पूर्ण बजेटको तीन चौथाइ भाग पछिल्लो चौमासिकमा गएर खर्च हुने र सम्पूर्ण खर्चको झण्डै आधा जसो आर्थिक वर्षको अन्तिम एक महिनामा खर्च हुदै आएको देखिन्छ । यो अति नै नकारात्मक पक्ष हो । ढिलो गरी बजेट आउँदा यी पछिल्लो चौमासिकमा खर्च गर्नको लागि त्यो प्रक्रिया नै पूरा गराउने समय हुँदैन । त्यो केवल खर्च गर्नका लागि मात्र गरिने र परिणामको मापन नगरिने भएकाले बजेटको दुरुपयोग अत्याधिक हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।
चौथो परिणाम : बजेट धकेल्ने संस्कृतिकै रुपमा विकास
यसपटक चुनावका कारण बजेट पछि धकेलिने सम्भावना भयो भने त्यो राजनीतिक पक्ष हो । यसपाली चुनावको प्रसंग आउँला, अर्को साल अरु कुनै प्रसंग आउँला । त्यसले गर्दा सबै कुराको असर बजेटमा गएर थेग्रिने स्थिति आउँछ । यसले संस्कृतिकै रुपमा लिन सक्छ । तसर्थ चुनावका कारणले अर्थात कुनै वहानाले यो बजेट चाहिं पछाडि सार्ने प्रवृत्तिलाई समयमै निरुत्साहित पार्नुपर्छ ।
पाँचौ परिणाम : लगानीको वातावरण नहुने
ढिलो गरी बजेट आउँदा लगानी प्रभावित हुन्छ । किनकि लगानीका लागि एउटा लामो प्रक्रिया हुन्छ, त्यसका लागि अनेक किसिमका विश्लेषणहरु हुनुपर्छ । त्यसकारण यसले लगानीको वातावरण विगार्छ । पर्याप्त लगानी गर्न पाउदैन।
छैंटौ परिणाम : आर्थिक बृद्धिमा असर
पूँजीगत खर्चको असर सीधै आर्थिक बृद्धिसँग सरोकार राख्छ । जेठ १५ भन्दा पछाडि अर्थात ढिलो गरी बजेट आउने स्थिति आयो भने त्यसले समग्रमा देशमा लगानीको वातावरणलाई कमजोर बनाउँछ । लगानी कमजोर भएपछि उत्पादन कमजोर हुन्छ । त्यसले रोजगारीमा असर पार्छ । आम्दानी र बचतको प्रवृत्तिमा असर पर्न गई यसले समग्र आर्थिक बृद्धि दरलाई कमजोर र सुस्त बनाउँछ । यस आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत भन्दा माथि आर्थिक बृद्धिदर हासिल हुने स्थिति आउनुमा समयमै बजेट आएकाले पनि हो ।
सरकार के गर्न सक्छ ?
चुनावलाई प्रभावित बनाउने उद्देश्यले सरकारले बजेट ल्याएर आउँछ भन्ने विपक्षीहरुको भनाइमा पनि केही सत्यता छ । तर सरकारमा के एउटा क्षमता हुनुपर्‍यो भने विपक्षीलाई पनि विश्वासमा लिएर कमसेकम संविधानमै व्यवस्था भइसकेको कुरालाई पालना गर्नुपर्छ । त्यसकारण विपक्षीलाई विश्वासमा बजेट ल्याएर आउनु सरकारको क्षमता हो र सरकारले त्यो गर्नसक्नुपर्छ । जेठ १५ मै बजेट आएन भने बजेट कहिले आउँछ भन्ने प्रश्न उत्तिखेरै आउँछ । जेठ १५ पछि जत्ति समय पछि धकेलिन्छ, त्यसले सरकारको खर्च गर्ने कार्य दक्षतामा प्रश्न मात्र खडा गर्दैन, आर्थिक विकासका लागि पनि बाधक बन्ने भएकाले बजेट समयमै आउनुपर्छ ।
आर्थिक विश्लेषक सञ्जय आचार्यसँग पी.टी. लोप्चनले गरेको कुराकानीमा आधारित ।